Iindaba -I-BXL yokuPakisha okuGqwesileyo kweGuizhou Factory isayinwe ngokusemthethweni!
I-BXL yokuPakisha okuYilayo kweGuizhou Factory ityikitywe ngokusemthethweni!
Lo nyaka, ohambelana nesikhumbuzo seminyaka engama-21 senkampani, iBXL Creative yamenywa nguRhulumente wePhondo waseGuizhou ukuba akhe umzi-mveliso eGuizhou ukukhuthaza uphuhliso lwezoqoqosho apho. Njengenkampani edwelisiweyo, luxanduva lwethu ukufaka isandla kuluntu. Ngapha koko, iya kuba sisicwangciso esiliqili esibalulekileyo sokuba inkampani yandise ishishini layo kwingingqi ekumazantsi mpuma e China.
I-BXL Creative iye kwiPhondo laseGuizhou kuphando kunye nokukhethwa kwesiza.
Ukusukela ngoMeyi ukuya kuSeptemba 2020, uSihlalo wenkampani uZhao Guoyi wakhokela iqela ukuba lihlole kwaye lenze uphando kwiindawo ezininzi eGuizhou. Emva kohlalutyo olucokisekileyo ngabaphathi abaphezulu benkampani, i-BXL Southwest Facility yahlaliswa kwindawo yoPhuhliso lwezoQoqosho kwiJinsha County, kwisixeko saseBijie, kwiPhondo laseGuizhou
Ukutyelela kunye nokutshintshiselana kwikomkhulu le-BXL yoyilo.
Kwintlanganiso yokutshintshiselana e-Shenzhen, i-HQ ye-BXL Creative, la maqela mabini afikelele kwisivumelwano sokudibanisa izibonelelo zawo, izixhobo kunye nentsebenziswano enzulu ukufezekisa inzuzo kunye nokuphumelela.
Umsitho wokusayinwa kweprojekthi
USekela Nobhala weKomidi leQela laseJinsha noMeya weSithili u-Li Tao (ngasekunene) kunye no-Shenzhen BXL Creative Packaging Co, Ltd. Usihlalo u-Zhao Guoyi kude (ekhohlo) batyikitye isivumelwano se "Guizhou BXL Creative Packaging Production Base Isivumelwano seNtsebenziswano kuTyalo-mali" egameni lawo omabini amaqela .
Egqithileyo I-BXL ye-Creative Won 4 yokuPakisha amaBhaso okuKhuphisana kuKhuphiswano lweeMbasa zeMobius
Okulandelayo: I-BXL Creative Won ezintathu zePentawards zaMazwe ngaMazwe zokuYila